Amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala elinye elinombono wolwandle kumgangatho wokuqala wesakhiwo esiphakamileyo seShuangyue Bay Phase III yaseHawaii. - I-Airbnb
Amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala elinye elinombono wolwandle kumgangatho wokuqala wesakhiwo esiphakamileyo seShuangyue Bay Phase III yaseHawaii.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguWei
1. Ulwazi lwegumbi leeNdwendwe: IVanke Shuangyue Bay Phase III C30/C28 Isakhiwo soKumkani Umgangatho ophezulu ophakamileyo ngaphezu komgangatho we-21, amagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlala elinye, elixhotyiswe ngeprojector yesikrini esine-intshi eyi-100-intshi ephezulu, ulwandle olukhululekileyo, ezantsi ukuya ezantsi. beach ngemizuzwana.
2. Ukuhamba: I-Vanke Shuangyue Bay Phase III Building C30, yiza ekungeneni kokuqala kweVanke Shuangyue Bay Community (iSango 8), uqhube ngqo kwindawo ephakamileyo ekufutshane nolwandle, kwaye uya kufika kwi-Gumbi 203, iSakhiwo C30, kwidesika engaphambili.
3. Ukuba ufuna ukudlala i-mahjong, nceda udibanise kwaye unxibelelane kwangaphambili.
1. Ukuba uza nesilwanyana sasekhaya, uya kuhlawuliswa iRMB 40 yokucoca ngokukhethekileyo, ukususwa kweenwele kunye nokucoca, kuxhomekeke kubungakanani besilwanyana. kwaye wonakalise ifanitshala, uya kuhlawulwa ngexabiso.
2. Igumbi lehotele eliyilwe yiVanke Real Estate alinalo ikhitshi, umbhobho wokukhupha umsi, okanye indawo yokubeka umsi. Ngokomthetho, ukupheka akuvumelekanga. Ukuze uqinisekise ucoceko lwegumbi leendwendwe, nceda ungapheki. igumbi leendwendwe.
Yuehai Meiliwan Indlu, Pinghai Town, Huidong County, ise-Building C30, Wanglin Beach, Isigaba 3 Vanke Shuangyue Bay I kwidesika yomamkeli ibekwe Room 203. Yiza itheko audio-visual ezahlukeneyo;. Ukubona ukuphuma kwelanga ka Shuangyue Dongwan empumalanga, Shuangyue Bay Ukwakhelwa ubuhle kuLwandle Turtle Nature Reserve emzantsi, uze ubone ngaselunxwemeni ngokupheleleyo Shuangyue Bay entshona kunye kwelanga ukuvutha omhle Phoenix. Kukho engaselwandle kwimithombo ashushu ekufutshane., Pinghai City Ancient, Turtle IBay kunye neMangrove Park, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Wei
Qhagamshelana kwangaphambili ngaphambi kokungena, thumela izikhokelo zohambo, jonga indawo, kwaye ucebise ngamanyathelo okutya, ukusela kunye nokudlala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Huizhou